ကောင်းကင်ကို: မျက်ကန်း မျိုးချစ်စိတ်
Posted by Kaung Kin Ko at 1:12 AM
ဧရာဝတီကိုချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်တွေလည်း ရှိနေမှာပဲလေ...
"ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး အော်နေတဲ့သူတွေလည်း သေချာစဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်။ ကိုယ်က ဒီမိုကရေစီတွေ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို တဘက်မှာ အော်နေပြီးတော့ တဘက်မှာ တခြားသူတယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကို လိုက်ချုပ်ချယ်နေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်တောင်းတဲ့ အယူအဆကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လက်မခံနိုင်သလို ဖြစ်နေပြီ။"
Good Post with fair view.
ဒီ post ကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။ဗမာပြည်သူတွေကနေရင်းထိုင်ရင်း
ကိုသတ်မယ်ဖြတ်မယ်လိုက်လုပ်နေတာလဲမဟုတ်ဘူး။ ဗမာပြည်မှာ စည်းလုံးမှု့ပျက်ပြားနေတဲ့အချိန်၊နိုင်ငံရေးအရ
သူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက် ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ မျက်နှာကိုမကြည့်မကြည့်ဘဲ
သူတွေကမုန်းတာ၊ မုန်းတဲ့လူတွေရဲ့အလွန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာနဲ့သွားတူနေလဲဆိုတော့
ဗမာပြည်ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တပ်နဲ့ ဦးနေဝင်းကိုလူတွေကသိပ်မုန်းကြပါတယ်။ ဒါကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီးက
လူတွေကို ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကို စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားနဲ့လို့ ပြောခဲ့တာသွားသတိရပါတယ်။အခုဗမာတွေက
Racism လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ရအောင် ဗမာတွေကတရုတ်တွေကိုလူမျိုးရေးအရအနိုင်ကျင့် နေတာ ရောဟုတ်လို့လား။
Racism ဆိုတာ လူမျိုးတမျိုးက သူတို့ကိုသူတို့ တခြားလူမျိုးသာလွန်မြင့်မြတ်တယ်လို့ယူဆပြီး တခြားလူမျိုးတွေအပေါ်နှိမ်ချဆက်ဆံတာကနေ သတ်မယ်ဖြတ်မယ်၊
လူမျိုးတုံးအောင်ရှင်းပြစ်မယ်လို့ ကြိုးစားလာမှသာ Racism လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အခုကိစ္စမှာ ဗမာတွေက ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အေးအေး ဆေးဆေးနေနေတဲ့ကိစ္စမှာတရုတ်တွေကသာ ပြည်သူလူထုကို သတ်ဖြတ်ဖိနှိပ်ညှင်းဆဲနေတဲ့စစ်အစိုးရကို သူတို့အကျိုးအတွက်ပေါင်းပြီး
အုပ်စိုးဖို့ကြိုးစား၊ တရုတ်တွေဗမာပြည်ထဲကိုစိမ့်ဝင်စေပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ မြေတွေ၊သယံဇာတကို နောက်ကွယ်က တရားမဝင်တဲ့ငွေတွေနဲ့ ဝယ်ပြီး ဂုတ်သွေးစုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လို့ လူတွေက အဲ့ဒီတရုတ်တွေကို မုန်းတီးကြတာ Racism မဟုတ်ပါဘူး။
အခုကိစ္စမှာ တရုတ်နိုင်ငံ နဲ့ လှိမ့်ဝင်လာတဲ့ တရုတ်တွေကို ဗမာတွေမှ မဟုတ် ဘူး ဗမာပြည်မှာမွေးတဲ့တရုတ်တွေလဲအမြင်
စာရေးသူ အနေနဲ့ Racism လို့ဆိုအောင် Racism ဆိုတာဘာလဲသေသေချာချာသိဖို့ အရင်ကြိုးစားပါ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုသွေးစုပ်ချယ်လှယ် ကိုယ့် လူမျိုးကိုကျွန်ဇတ်သွင်းမယ့် ခေတ်သစ် Colonization ကိုဆန့်ကျင်တာ ကို Racism လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး မမုန်းဖို့ ပြောနေတာဟာ
မိအေးနှစ်ခါနာဆိုသလိုဖြစ်နေပြီး ဗမာတွေကို အငုံစိတ်ဝင်အောင်သွင်းပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ်
ဘယ်လူမျိုးမဆို တနေ့ ပျောက်မှာပဲဆိုပြီး
ခံယူထားတာ ကို မပြောလိုပေမယ့်
တကမ္ဘာ လုံးကို ပတ်ရှာကြည့်ပါ၊ ကိုယ့် လူမျိုးကို
တခြားလူမျိုး က မျိုမှာကို မျိုပါစေပေါ့ ဘာဂရုစိုက်စရာမှတ်လို့ ဆိုပြီးသဘောကျတဲ့ လူမျိုး ရှိရင်ပြပါ။ တရုတ်တွေ ၊ ဂျပန်တွေ၊ ဂျာမန်တွေ၊ ပြင်သစ်တွေ၊အင်္ဂလိပ်တွေ ၊ဗမာတွေထက်တောင်အကဲဆတ်ပါသေးတယ်။
အနောက်နိုင်ငံ နဲ့ ဥရောပတွေမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ လက်ခံတယ်ဆိုတာ သူတို့လူမျိုး အမျိုခံနေတာ မဟုတ် ဘူး။ တခြားလူမျိုးတွေကိုသူတို့ လူမျိုးနဲ့
ရောစပ်စေပြီး သူတို့ သူတို့ယဉ်ကျေးမှု့ culture အောက်ကို တဖြေးဖြေးနဲ့ ဆွဲသွင်းသွားတာ (သို့ ) သူ့တို့ယဉ်ကျေးမှု့ ကို ပိုမို broaden ဖြစ်အောင် expend လုပ်သွားတာပါ။
ဥပမာ ပြင်သင်မှာ middle eastern တွေများတယ်ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒီ middle eastern
တွေကို ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှု့အောက် ပြင်သစ်အနေနဲ့
ဆွဲသွင်းချင်တာ ၊ ပြင်သစ်လူမျိုးပျောက်ပြီး middle eastern ယဉ်ကျေးမှု့လွမ်းမိုးသွားတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်သွားစေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီလို ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတော့ ဥရောပမှာMulticulturalism ဟာမအောင်မြင်ဘူးလို့ ထုတ်ပြောရတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာတယ်။
ဗမာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်တွေ သိမ်းတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ဂုတ်သွေးစုပ်ချယ်လှယ် အုပ်ချုပ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေကိုမုန်းတယ်၊
တော်လှန်တယ်။စစ်တိုက်တယ်၊သတ်တယ်။အဲ့ဒါ Racism လား။ ဖြေပါ။
တခွန်းပဲ ပြောလိုက်မယ်။ တရုတ် ကို တယုတ်လို့ နှိမ်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ရေးတာ၊ မြန်မာပြည်ထဲက တရုတ်တွေကို ပါ ထိခိုက်တာ၊ လူမျိုး တမျိုးကို နှိမ်ချတာက Racism မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ အပေါ်က ကွန်မန့်ပေးသူ လေ့လာမှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုနေပြီ။ Racists တွေကတော့ နိုင်ငံခြားမှာလည်း ရှိမှာပဲ။ အဖြူတွေထဲမှာလည်း ရှိမှာပဲ။ အသိဥာဏ် ရှိတဲ့လူကတော့ အဲဒါတွေကို လိုက်ပြီး အတု မယူသင့်ဘူးလေ။ ကျနော့် ပို့စ်ထဲမှာ တယောက်ချင်းရဲ့ ဆန္ဒလို့ပဲ ရေးထားတယ်နော်။ ပျူလူမျိုး ကိစ္စက ဥပမာ ပေးထားတာ။ ကျနော့်အနေနဲ့ သွေးနှော မနှော ဆိုတာကလည်း လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကိုပဲ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အညီ ဦးစားပေးရမယ်လို့ ရေးထားတာ။ လုံးဝ သွေးမနှောရေး ဝါဒီက မနှောနဲ့။ လူအချင်းချင်း တန်းတူပဲ မကွာဘူးလို့ ခံယူချင် နှောချင်နှော။ အဲလို သဘောမျိုး။ သတ်ဖြတ်မှ Racism မဟုတ်ဘူးဗျ။ လူမျိုး တမျိုးကို နှိမ်ရင်ကို racist ဖြစ်သွားပြီ။ တရုတ်တွေကို လိုက်မုန်းတဲ့သူ ရှိလို့ ရေးတာပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေကို မြန်မာစစ်တပ်က အနိုင်ကျင့်တဲ့ ကိစ္စဆိုလည်း အတူတူပဲလေ။ တချို့တွေက မြန်မာတွေကိုပါ မုန်းကြတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ အစိုးရ မကောင်းရင် အစိုးရကိုပဲ အပြစ်ပြောစေချင်တယ်။ အကုန်လုံးကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကြုံးမုန်းတာတွေကို ရေးထားမှန်း အရှင်းကြီးပဲ။ ခုပြောတာ မြစ်ဆုံကိစ္စကို ထောက်ခံနေတာများ ထင်လို့ လား။ မြစ်ဆုံကိစ္စက ဟိုးအစောကြိးကတည်းက ကန့်ကွက်ပြီးသား။ (((အခုကိစ္စမှာ တရုတ်နိုင်ငံ နဲ့ လှိမ့်ဝင်လာတဲ့ တရုတ်တွေကို ဗမာတွေမှ မဟုတ် ဘူး ဗမာပြည်မှာမွေးတဲ့တရုတ်တွေလဲအမြင်
မကြည်လင်ကြပါ))) ကျနော်လည်း အဲလိုပဲ ပြောထားတာလေ။ ခင်ဗျား စာသေချာမဖတ်ပဲ ရမ်းပြောနေမှန်း သိသာတယ်။ ကျနော်ပြောထားတာ အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ မဆိုင်ကြောင်း ပြောထားတာ။
Hey, Kaung Kim Ko,
I like your poems, but i totally disagree with u. I am an engineer and now working in Singapore. Now, u go and see and listen how the china government say about this project, Hong Kong TV channel says what translated by Nine Nine Sanay.They threatened our country and they said they need to give lessons for like this doing. You should study thoroughly and if you would like to discuss about this, i am ready and i can give you my phone number
နန္ဒလင်း ပြောတာ လွဲနေပြီဗျ။ ကျနော်က မြစ်ဆုံဆည်အကြောင်းကို ပြောတာမှ မဟုတ်တာ။ မြစ်ဆုံဆည်ကို ကျနော်လည်း ကန့်ကွက်ခဲ့တာပဲ။ ကျနော်ပြောတာက racism အကြောင်းပြောနေတာ။ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်တွေကိုပါ တယုတ်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ သူရဲ့ အပြောကနေ ဆက်စပ်ပြီး လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုက မကောင်းကြောင်း ပြောတာပါ။ မြစ်ဆုံဆည်နဲ့ တရုတ်အစိုးရ မကောင်းကြောင်းကတော့ ကျနော် အရင်ကတည်းက လက်ခံပြီးသားပါ။ အစိုးရ မကောင်းတိုင်း ဒီမြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်တွေကို တိုက်ခိုက်ရင် သဘာဝ ကျပါ့မလား။ အဲလို တိုက်ခိုက်ကြေးဆို မြန်မာအစိုးရက တိုင်းရင်းသားတွေကို နှိပ်စက်တဲ့ အခါ မြန်မာတွေ အကုန်လုံး မကောင်းဘူးလက်စားချေမယ်လို့ ပြောလာရင် နန္ဒလင်းက လက်ခံမှာပဲလား။ (တရုတ်အစိုးရ မကောင်းမှန်းနဲ့ မြစ်ဆုံဆည် မကောင်းမှန်းတော့ ပြောနေစရာကို မလိုပါဘူး။ အသိသာကြီးပါ။ ကျနော်ပြောတာက racism ကို ပြောတာပါ။)
လူမျိုးတုံးအောင်ရှင်းပြစ်မယ်လို့ ကြိုးစားလာမှသာ Racism လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ )) ကို tasay အဲဒါက racism တင် မကတော့ဘူးဗျ။ Genocide လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လူမျိုးတမျိုးကို နှိမ်ချ ဆက်ဆံရုံနဲ့တင် racism ဖြစ်သွားပါပြီ။
I see but I believe that most of the
chinese who was born in myanmar are also selfish.They thought that they are higher than Burma and their parents prohibited strictly to marry burma people because burma people are so poor and we are not worth to marry chinese girl.If u don't believe about this, u can ask .And then, most of the Chinese people in Myanmar treated Burma people as lower than their living standards and can not compare with them. I believe that most of the Chinese people in the world are basically the same and they are so selfish and they only see for their selves.U can check about this.
That is why, I would like to discuss in details.Thanks
ayan kg tal byar
:) face book mhar shar pa ya say
@Nanda Lynn: You are making sweeping comments now, aren't you? I'maChinese-Myanmar born and bred in Myanmar and now married to your so-called pure Myanmar man. I love him to bits and my parents accepted him as their own son. Yes, he's pure Myanmar - not even mixed!Let me ask you something. Don't pure Burmese look down on other race too? I encountered blatant racism back in my high school day in Myanmar where even teachers said racist things like "Ka Lar Tway, you guys are only good at cleaning toilets".Yes, I have seen them. The main reason why Chinese people may not want their children to marry another race is that the way of thinking, the attitude towards working and saving can be different. Most Chinese are independent when it comes to doing business and taking care of their own family and not every race has the same view. So here the thinking can clash when the values held by two parties are not the same. But apart from that,I haven't looked down on any race! Now my Chinese-Myanmar friend who studied in Singapore went back to Myanmar so that she could contribute her knowledge in building her birth-place country. Are you going to hate her too?
စာရေးဆရာမ ကြည်အေးရဲ့ ဟောင်းနေပေမယ့် ခေတ်မီနေဆဲ စာပါ။
“ရာဇဝင်အဆက်ဆက်မှာ လူမျိုးအချင်းချင်းပေါင်းပြီး လူမျိုးသစ်ဖြစ်လာတာ၊ လူမျိုးတစ်မျိုးက တစ်မျိုးကို မျိုသွားတာတွေ ရှိသားပဲ။ တရုတ်ခေါ်ခေါ်၊ အင်္ဂလိပ်ခေါ်ခေါ် လူတွေလည်း လူလူချင်း ရောနှောသွားတာပဲ၊ အထွေးတော့ ဘာမှ ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး၊ ဗမာမှ ယူမယ် စိတ်မကူးပါဘူး။ တကယ်တော့ ဂျာမန်ကောင်းကင်မှာ ဂျူးလူမျိုးတွေ ပြာကျတဲ့ အငွေ့နဲ့ မှောင်မည်းသွားတဲ့ အဖြစ်မျိုးသာ ကြောက်စရာ ရွံစရာပါ”thanks for clear concept! pl, more upload like that post. we, all need to learn how to think and how to accept the situation.